महेन्द्र धोनीले दबाबमा आएर कप्तानीबाट सन्यास दिएको खुलासा - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! महेन्द्र धोनीले दबाबमा आएर कप्तानीबाट सन्यास दिएको खुलासा
भारत, २५ पुस – महेन्द्र धोनीले कप्तानबाट सन्यास लिएपछि उनको विषयमा थुप्रै टिकाटिप्पनी उठेका छन्।
हिन्दुस्तान टाइम्स खबरले प्रकाशित गरेको एक खबर अनुसार धोनीले खुसीले नभई दबाबमा आएर कप्तानीबाट सन्यास लिएको खुलासा भएको हो। धोनीले जनवरी ४ मा एकदिवशीय र टी-२० क्रिकेटबाट सन्यास लिएका हुन्।
धोनीले कप्तानबाट सन्यास लिएको निर्णयपछि उनका समर्थकहरु चकित बनेका छन्। जनवरी ४ मा उनले बीसीसीआईलाई अचानक पत्र पठाएपछि उनले कसैको दबाबमा आएर कप्तानबाट राजिनामा दिएको हुन सक्ने समाचारमा जनाइएको छ। उनले सन्यास लिएपछि सबैलाई कसैको दबाबमा आउने उनले अचानक सन्यासको निर्णय गरेको बताइएको छ।
के थियो धोनीले सन्यास लिनुको कारण ?
बीसीसीआईका प्रमुख एमएसके प्रसादले नागपुरको झारखण्ड र गुजरातको प्रतिस्पर्धाको दौरानमा धोनीसँग भेटेपछि उनले कप्नातीबाट सन्यास लिए। त्यसको केही समयपछि एमएसके प्रसादले दिएको बयानमा भनेका थिए, धोनीलाई सोलुट गर्छु, उनले कप्नाती छोड्ने समय सही हो। उनले बुझेका छन् की टेस्ट प्रतियोगितमा शानदार प्रदर्शनका लागि विराट कोहली तयार छन्। धोनी टेस्टमा शानदार प्रदर्शन गर्ने खेलाडीका लागि परिचित भइसकेका छन्।
बीसीसीआईको भनाइका आधार मानेर भन्न सकिन्छ की कोहलीलाई कप्तानी दिनका लागि पूरै तयारी भइसकेको थियो। त्यसै कारण एमएसके प्रसाद र बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरीले सन्यासका लागि धेरै पटक दबाब दिइएको समाचारमा जनाइएको छ।
धोनीको सन्यासपछि कोहलीलाई कप्तानीमा नियुक्त गरिसकेको छ। एजेन्सी
आहा रारा गोल्डकपको उदघाटन खेलमा सहारा र सुदूरपश्चिम-११ भिड्ने
चिनियाँ सुपर लिगका क्लबमाथि अङ्कुश
एन्फाको भ्रष्टाचार पुनः छानबिन हुने
जब धोनीले आफू कप्तान नभएको बिर्सिए !